फ्राईडे रिलिज : हलमा तीन फिल्म, दर्शकको चोइस कुन ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
फ्राईडे रिलिज : हलमा तीन फिल्म, दर्शकको चोइस कुन ?
फिल्मी फण्डा । आज शुक्रबारबाट तीन फिल्म एकसाथ रिलिज भएको छ । आजबाट हलहरुमा विनय श्रेष्ठ निर्मित रोमियो एण्ड मुना, सिल्भर लेक पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्मित चि मुची चि र सकुलगुण्डा एकसाथ प्रर्दशनमा आएको हो । फिल्म सुकुलगुण्डा विना प्रचारप्रसार नै आजबाट रिलिजमा आएको छ ।
फिल्म रोमियो एण्ड मुनामा विनय श्रेष्ठ, श्रृष्टि श्रेष्ठ, प्रज्वल सुजल गिरी लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्मलाई नरेश कुमार केसीले निर्देशन गरेका हुन् । शहरमा बस्ने रोमियो र गाउँकी मुनाबिचको प्रेमयात्राको बीचमा बुनिएको छ । प्रशन्न गोपाली, रोजी श्रेष्ठ र राम शर्माको संयुक्त लगानी रहेको फिल्ममा दिपाङ्कर सिक्दरको छायाँकन रहेको छ ।
यस्तै फिल्म चि मुची चिमा शुशान्त कार्की, अलिशा शर्मा र सुनिल क्षेत्री लगायतको अभिनय रहेको छ । फिल्ममा दिनेश श्रेष्ठको निर्देशन रहेको छ । फिल्मका निर्माता अरुण कुमार गुरुङ, महेश्वर खत्री, सुबास भुर्तेल, डब बहादुर गुरुङ हुन् भने फिल्मको कार्यकारी निर्मातामा शिवराज कार्की हुन् । फिल्ममा सुनिल क्षेत्री र विक्रम स्वाँरको कोरियोग्राफी छ । बासु न्यौपानेले खिचेको फिल्मको सम्पादन भूपेन्द्र अधिकारीले सम्हालेका छन् ।